‘झण्डा छाडेर नआएसम्म गोविन्द केसीसँग वार्ता हुँदैन’ ::Nepali TV
You are here : Home News ‘झण्डा छाडेर नआएसम्म गोविन्द केसीसँग वार्ता हुँदैन’
‘झण्डा छाडेर नआएसम्म गोविन्द केसीसँग वार्ता हुँदैन’
काठमाडौँः सरकारले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा दलीय घुसपैठ भएको ठहर गर्दै झण्डा छाडेर नआएसम्म कुनै वार्ता नहुने जनाएको छ । शनिबार मात्रै निशर्त वार्ताका लागि आह्वान गरेको सरकारले केसी केही दलको उक्साहटमा अघि बढेको ठहर गर्दै उनका ‘ठेकेदार’सँग नभइ सीधै उनैसँग वार्ता गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।
केसीको पक्षमा शनिबार भएको भनिएको प्रदर्शनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलले झण्डासहित सहभागिता जनाएपछि सरकारी पक्ष बिच्किएको छ । नयाँ बानेश्वरमा केसीको पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशका आगो लाग्ने भाषण गर्नुअघि तरुण दल र प्रहरीबीच दुवैतर्फ घाइते हुने गरी झडप भएको थियो ।
यसअघि नै केसी नेपाली कांग्रेसको उक्साहटमा परेको निचोड निकालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले शनिबारै केसीसँग निशर्त वार्ता हुने अडान सार्वजनिक गरेको छ । अर्कातिर केसीले भने सरकारले बनाएको कर्मचारीको वार्ता टोलीसँग वार्ता हुनै नसक्ने अडान लिइसकेका छन् ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार अब केसीसँग निशर्त वार्ता हुन्छ तर त्यसका लागि पनि उनले कांग्रेसको झण्डा छाडेर आउन तयार हुनुपर्छ । ‘सरकार वार्ताका लागि सदैव तयार छ, तर वार्तामा पनि लेनदेन हुन्छ, केसीको सबै माग पुरा हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘यदि वार्तामा बस्नुपर्छ भने सबै कुरामा खुल्ला हुन सक्नुपर्छ, तर केसी राजनीतिक दलको उक्साहट र प्रभावमा परिसकेकाले पहिले उनले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’
सरकारी पक्षले अहिलेको समस्या खडा गर्ने काम केसी र उनका समर्थकबाट भएको दाबी गरेको छ । २२ दिनसम्म अनशन बस्दा पनि केसीमा कुनै प्रभाव नपरेकाले उनको अनशनमै सरकारले शंका गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजागाइँ केसीले चौथो दिनमै अनशन तोडिसकेको बताउँछन् । ‘केसी २२ दिनदेखि अनशन बसेको भनिएको छ, तर उनी हट्टाकट्टा र तन्दुरुस्त छन्, उनले चौथो दिनमै अनशन तोडिसकेका छन्’, उनी भन्छन्m ‘जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याएपछि उनले सरकारले खटाएका चिकित्सकलाई रगत जाँच्न पनि दिएका छैनन्, रगत जाँच्न नदिनुको कारण के हो ? रगत जाँच्न नदिनुको अर्थ के हो ? उनको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गोप्य राखिएको छ, २२ दिनसम्म अनशन बसेको मान्छेले यसरी हठ गर्नै सक्दैन ।’
सरकारी पक्षले रगत जाँच्न नदिनुलाई पनि शंकास्पद भनेको छ । ‘स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएको अवस्था छ, सरकारले खटाएका डाक्टरलाई जाँच्नै दिइँदैन’, बजागाइँ भन्छन्, ‘यसको नियत के हो ? रगत जाँच भएको खण्डमा आउने प्रतिवेदनको डर केसीमा देखिन्छ ।’
बजागाइँले सरकारलाई आफ्नो काम गर्न दिएमा सबै कुरा मिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्‍यो । स्वतन्त्र नागरिकको ‘सत्याग्रह’ भनिएको छ तर गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रको होइन, राजनीतिक नारा लिएर कुनै दलको झण्डामुनि बसेका छन् । झण्डा छोडेर आएमा वार्ता हुन्छ, उनका केही माग पुरा गर्न पनि सरकार तयार छ ।’
केसीले सरकारी कर्मचारीको टोलीसँग वार्ता नगर्ने बताइरहेका बेला सरकारले पनि अबको वार्ता उनका ‘ठेकेदार’ सँग नहुने जनाएको छ । ‘अबको वार्ता पारदर्शीरुपमा र सीधा सीधा गोविन्द केसीसँग हुन्छ’, बजागाइँ भन्छन्, ‘कर्मचारीसँग वार्ता गर्ने अथोरिटी छैन भने उहाँ (गोविन्द केसी) को अथोरिटीचाहिँ के हो, उहाँ सरकारको कर्मचारी होइन, समस्या उहाँहरुले खडा गरेको हो, सरकारले होइन ।’
के भन्छन् गोविन्द केसी
केसीले यसअघि नै सरकारले खटाएका कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । उनले संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नभएसम्म अनशन जारी रहने बताएका छन् । केसी पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेक सिंहले सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म कुनै किसिमको वार्ता हुनै नसक्ने बताए । उनले पहिले विधेयक फिर्ता भएपछि मात्रै वार्ता हुने बताए ।
जुम्लामा २० औँ दिनको अनशन जारी रहँदा सरकारले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएका केसीले अहिले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि अस्वीकार गरेका छन् । उनले रगत जाँच्न पनि अस्वीकार गरेपछि सरकार अफ्ठेरोमा परेको छ ।
सरकारले जबरजस्ती अपहरणको शैलीमा आफुलाई काठमाडौँ ल्याएको भन्दै केसीले यहाँ उपलब्ध कुनै पनि किसिमका स्वास्थ्य जाँच र सुविधा लिन अस्विकार गरेका हुन् ।
उनका सहयोगी चिकित्सकका अनुसार कर्णालीमा रहँदैदेखि केसीको मुटुको चालमा गम्भीर गडबडी देखिएको थियो । केसीको यो अडानले इसिजी गरेर मुटुको अवस्थाबारे जानकारी लिन नसकिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौ आएकै दिन मुटुको अवस्थाबारे जाँच गरी केसीलाई सीसीयुमा लाने तयारी थियो । तर जाँच गर्न नै अस्विकार गरेकाले केसीका शरीर भित्रको अवस्था केही थाहा नभएको सिंह बताउँछन् । केसीले विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएसँगै उनको अनशन पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो हुने अवस्था देखिएको छ । शनिबार भेट गर्न आएका कसैसँग पनि उनले दोहोरो संवाद गर्न नसकेको सिंहको भनाइ छ ।
सिंहका अनुसार शनिबार केसीले केदारभक्त माथेमार पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि हातको इसाराले मात्र कुरा गरेको दाबी सिंहले गरेका छन् । ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको घटनापछि उहाँ विक्षिप्त हुनुहुन्छ’, सिंहले भने, ‘सरकारले माग पुरा गर्दिन भनेर हलो अड्काएपछि वार्ता अघि बढेको छैन, वार्ताको वातावरण बनाउन तोडमोड भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ, त्यो नभएसम्म हामी वार्तामा बस्दैनौँ ।’
डा. केसीले पनि आफूलाई काठमाडौँ ल्याएर अनशन तुहाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘आखिर म अनशमा थिएँ, जे यहाँ गरिन्छ, त्यो कर्णालीमा पनि भइ रहेको थियो’, उनले निकट सहयोगीहरुसँँग भनेका छन्, ‘स्वास्थ्योपचारको बहानामा मलाई त्यहाँबाट उठाएर सरकारले सम्पूर्ण अभियानलाई नै तुहाउन खोज्यो, तर म पछि हट्दिनँ ।’